दिउँसै रात पार्न खोज्दा यसरी पंगु भए प्रचण्ड, प्रमाणनै बाहिरियो ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
दिउँसै रात पार्न खोज्दा यसरी पंगु भए प्रचण्ड, प्रमाणनै बाहिरियो !
नेकपा एमालेले आफ्नो दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा गर्ने घोषणा गरे सँगै निकै उफ्रिपाफ्री गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको त्यो पारा अझै सकिएको छैन ।
एमालेले प्रचण्डलाई नै सिध्याउँनका लागी चितनवमा महाधिवेशन गर्न लागेको भनेर उनले पटक पटक अभिव्यक्ति दिएका छन् । चितवन आफ्नो मात्रै भएको भने जसो गरी प्रचण्डले भाषण गरिरहेका छन् तर उनले यो बिषयमा आफु पंगु भएको पत्तै पाएनन् ।
गत प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ मा बाम गठबन्धनका तर्फबाट स्वयमं नेकपा एमालको सहयोगमा सांसद निर्वाचित भएका प्रचण्डले अहिले एमालेले महाधिवेशन गर्न लाग्दा मेरो क्षेत्रमा किन आयो भनेर रुवाबासी गुर्न आफँमा हासँउठ्दो कुरा रहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली देखी सबै एमाले नेताहरुले चितवनमा महाधिवेशन गर्नुका पछि प्रचण्ड फ्याट्र नरहेको दावी गर्ने गरेका छन् तर प्रचण्ड भने मलाईनै सिध्याउँन यसो गरिएको भनेर भन्दै आएका छन् । प्रचण्डलाई मनको बाघले खाएको एमाले नेताहरुको तर्क छ ।
चितवनकै एमाले नेता देवी ज्ञवाली प्रचण्डलाई एमालेले सिध्याउँनै नपर्ने उनी आफैँ सकिने दाबी गर्दछन् । चितवनमा अहिले पनि हरेक हिसाबले एमालेनै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको भन्दै ज्ञवालीले एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्न किन नुहुने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
ओटीभी नेपाल डटकम सँगको कुराकानीमा नेता ज्ञवालीले बरु प्रचण्डनै चाँही चितवनको लागी टुरिष्ट भएको आरोप लगाए । प्रचण्डले अहिले एमोलेले मेरो क्षेत्रमा महाधिवेशन गर्न लाग्यो भनेर कराइरहेका छन् त्यो कुरा पनि गलत भएको पाइएको छ ।
एमाले नेता ज्ञवालीका अुनुसार महाधिवेशनको उद्घाटनसत्र हुने् स्थान नारायणी किनार एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्र हो भने बन्दसन्त्र हुने क्षेत्र सौराह क्षेत्र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे निर्वाचित भएको क्षेत्र हो । यसमा पनि प्रचण्डले दिउँसै रात पार्न खोजेको प्रमाणित भएको छ।
एमालेले चितवनमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने भनेपछि प्रचण्ड यसबीचमा ६ पटक त्यहाँ पुगिसकेका छन् भने पछिल्लो पटक त संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका ७ जना मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरुसहितको विकास वहस नै आयोजना गरेका छन् ।
प्रचण्डले जतिपटक चितवन गए, त्यति नै पटक एमालेले आफूलाई सिध्याउन र माओवादी कमजोर पार्न निहुँ खोजेर महाधिवेशन गर्न लागेको बताएका छन् । उनले चितवनलाई माया गरेकोमा केपी ओली र एमालेलाई धन्यवाद समेत भनिरहेका छन् ।
प्रचण्डको पटक पटकको अभिव्यक्तिको जवाफ ओलीले मंगलवार राधजानी काठमाडौंमा दिए । उनले प्रचण्ड उम्मेदवार भएको ठाउँमा एमालेले महाधिवेशन नै गर्न नपाउने हो भने ठाउँ खोज्नै मुस्किल पर्ने भनेर व्यंग्य गरे ।
ओलीले भने, ‘रोल्पामा गरौं भने उहाँ पहिले नै त्यहाँ उम्मेदवार बनेको ठाउँ । सिराहा गरौं भने दोस्रो पटक उम्मेदवार बनेको ठाउँ । काठमाडौंमा पनि उहाँ उम्मेदवार बनिसक्नुभएको । पछिल्लो पटक उहाँ चितवनमा उम्मेदवार बन्नुभयो । अब उहाँ उम्मेदवार बनेको ठाउँमा महाधिवेशन नै गर्न नपाइने हो भने भोलि म त्यो बाटो हिड्दा पनि मलाई नै सिध्याउन आयो भन्नुहोला ।’
प्रचण्डले भनेजस्तै एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गरेर उनलाई र माओवादीलाई सिध्याउन खोजेको हो त ?के चितवन माओवादीका गढ हो ?एमालेले माओवादीलाई र प्रचण्डलाई नै कमजोर बनाउँदा उसलाई फाइदा हुने हो रुयसका धेरै आयाम छन् ।
राजनीतिक दलको शक्ति मापन भनेको मूलरुपमा जनमतबाटै हुने हो । चितवनमा अहिलेसम्मका चुनावी नजिताहरुलाई हेर्ने हो भने प्रचण्डले दावी गरेजस्तो देखिन्न । चितवनमा आजको मितिमा पनि एमाले र कांग्रेस नै मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् भने माओवादी तेस्रो शक्ति हो ।
२०६४ सालको माहोलमा समेत चितवनमा क्लिन स्वीप गर्न नसकेको माओवादी त्यसयता खस्किँदै गएको जनमतहरुले देखाउँछ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको सहायताले माओवादीले भरतपुरमा मेयर जित्न सकेको थियो, त्यो पनि मपतत्र च्यातेर दोस्रोपटक मतदान गराएपछिमात्र ।
त्यसको लगत्तै भएको आम निर्वाचनमा प्रचण्ड आफैं एमालेको सहयोगमा सांसद जितेका थिए । प्रचण्डकै क्षेत्रमा पनि माओवादी तेस्रो दल हो । सो क्षेत्रमा प्रचण्ड उम्मेदवार हुँदा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २६ हजार १३७,एमालेले २४ हजार १५५ र माओवादीले २२ हजार ९८८ मत पाएको थियो ।
समग्र जिल्लाको समानुपातिक मत हेर्ने हो भने एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । एमालेले ९३ हजार ५३४ मत पाउँदा माओवादी त्यसको आधाभन्दा कम अर्था ४२ हजार ८५१ मा सिमित भएको थियो भने कांग्रेसले माओवादीभन्दा करीव दोब्बर ८१ हजार १०४ मत पाएको थियो ।
त्यसअघि स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्दा पनि एमाले एक्लै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । एमालेले महाधिवेशन गर्न लागेको पूर्वी चितवनका चारवटै नगरपालिकामा माओवादीले एउटा वडा सदस्य समेत जित्न सकेको थिएन भने एमालेले सबै नगरपालिका जितेको छ ।
चितवनका ७ स्थानीय तहमध्ये राप्ती,खैरहनी,कालिका र रत्ननगर नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखसहित बहुमत एमालेले जितेको छ । त्यस्तै माओवादीले मेयर जितेको माडी नगरपालिकामा पनि उपमेयरसहित बहुमत एमालेको छ ।
कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीले भरतपुरको मेयर जितेको थियो भने कांग्र्रेसले इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र भरतपुरको उपमेयर जितेको थियो ।
जिल्लाभरका ९८ वडामध्ये एमालेले ५७ वडाध्यक्ष जित्दा कांग्रेसले ३५ र माओवादीले जम्मा ६ वटा वडाध्यक्ष जितेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा देखिन्छ । एमालेका निर्वाचित ४ जना वडाध्यक्षबाहेक अरु सबै सोही पार्टीमा देखिन्छन् ।
चितवनमा एमालेले महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई आगामी चुनाव सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिन खोज्नु बेग्लै कुरा हो तर प्रचण्डले दावी गरेजस्तो एमालेको प्रतिस्पर्धी चितवनमा माओवादी होइन कांग्रेस नै हो । यदि झस्किने हो भने प्रचण्ड होइन कांग्रेस नेताहरु झस्किनुपर्ने थियो ।
आजको अवस्थामा पनि प्रचण्डले चितवनबाट चुनाव जित्न कांग्रेस वा एमालेमध्ये एउटा पार्टीको सहयोग लिनुपर्छ । त्यसैले एमालेले महाधिवेशन चितवनमा गर्दैमा प्रचण्ड वा माओवादी कमजोर हुने भन्ने तर्कमा दम देखिँदैन ।
बरु प्रचण्डले यहि मेसोमा ‘इमोसनल’ कुरा गरेर चितवनवासी र देशकै ध्यान आफूतिर खिच्न खोजेको भने बुझ्न सकिन्छ । एउटा के कुरा सत्य हो भने प्रचण्डका बाबु छोरीले नै आफ्नो शक्ति लगाएर चितवनको विकासका लागि बजेटको ओइरो भने लगाएकै छन् । त्यसको प्रतिफल भने चितवनबासीले नै महशुस गर्ने कुरा हो ।